China sy hetiny palitao manafana palitao | Eigday
Controller: ambaratonga bokotra 3 iray
Heater fanafanana: 7.4V 12W
Faritra fanafanana: tratra havia, tratra ankavanana ary ny lamosina
2. Fanasana milina
3. Volavola STYLISH AMIN'NY FABRIKA MAHASOA: Ny lamba vita amin'ny akorandriaka vita amin'ny lamba misy volon'ondry dia miantoka anao tsy hahavery hafanana be loatra ary hankafy hafanana mahafinaritra; Ny hood azo esorina dia natao manokana ho an'ny maraina mangatsiaka sy fiarovana fanampiny amin'ny andro be rivotra; Ny famolavolana manify dia manala anao amin'ny fanahiana momba ny hamaroana.
4. HEAT ACROSS BODY: singa fanamainana fibre karbaona 3 dia miteraka hafanana manerana ny faritra misy ny vatana (tratra havia sy havanana, afovoany averina); Amboary ny fanafana fanafanana 3 (Avo, salasalany, ambany) amin'ny tsindry bokotra tsotra fotsiny.
5. FANAFORANA haingana sy maharitra: hafanana vetivety amin'ny segondra miaraka amin'ny bateria voamarina 7.4V UL / CE; Hatramin'ny ora fiasana 8; Seranan-tsambo DC handefasana finday finday avo lenta sy finday hafa.
6. HO AN'NY DALAN'NY FIAINANA REHETRA SY NY ADVENTURES: Safidy mety sy mafana ho anao, olona ao amin'ny fianakaviana, namana, mpiasa, hankafizanao amin'ireo hetsika ivelany.
7. TSY MISY ATAHORANA REHETRA: Azo soloina ny masinina. Ny singa fanamainana fibre karbaona sy ny fananganana palitao dia natao hiaretana tsingerin'ny fanasana milina 50+.
Manana ny ozininay manokana izahay sy ny roa tamin'izy ireo lasa ISO9001: 2015 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao.
Manana rafitra fanaraha-maso kalitao vita izahay, ekipa IQC ho an'ny akora alohan'ny famokarana, ekipa SQC ho an'ny vokatra mandritra ny famokarana sy ny ekipa OQC ho an'ny fonosana alohan'ny fandefasana.
Saika ny vokatray dia CE, RoHS, FCC, PSE nankatoavina ary ny bateria rehetra lasa CE, RoHS, FCC, UL fanamarinana, mandinika bebe kokoa ny fiarovana sy ny fahatsapana ny mpanjifa izahay, manao ny tariby fanafanana avy amin'ny fibre karbaona mitambatra, izany milamina kokoa sy azo antoka kokoa noho ny tariby fanafanana vy, malefaka ihany koa noho ny tariby fanafanana fibre karbonika, izany koa no iray amin'ny antony mahatonga antsika ho iray amin'ireo mpanamboatra vokatra fanafanana 5 voalohany ao Shina.
Manaraka: Akanjo mafana